ဒီနေ့ တော့ အချိန်ပိုင်းအကြံပေး လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တစ်ခု ကို သွားတယ်.. ။
Organic သီးနှံ များကိုသာ သုံးစွဲ ရောင်းချလိုတဲ့ feel စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ကိုစိုးညီညီ က Cook Magazine အင်တာဗျူး နဲ့ အတူ ကျွန်မအား တွေ့ဆုံ လိုကြောင်း (ည ၈နာရီ ) ပြောထားတာ နဲ့ အိမ်မပြန်တော့ပါ..။
အလုပ်အပြီး အချိန်အပို မှာ ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဘုရား ရဲ့ မိုးညှင်းသိင်္ဂီ ကျောင်းကို ထွက်ခဲ့ ပါတယ်..။
ဆရာတော် ဘုရားက ပေါက်ခေါင်း တရားပွဲက ပြန်မရောက်သေးပါ..။
တရားစခန်းက ၂၅ရက်နေ့ ညနေ အဝင် ၂၆ ကနေ ၃၀ အထိပါ..။
ဆရာလေး ဒေါ်ခေမာ ၊ ဒေါ်ဥတ္တရာ တို့ နဲ့ အတူ လျှော်ထားတဲ့ကူရှင် အစွပ်များ စွပ်ပါတယ် ယောဂီတွေ လာရင် ထုိင်ရအောင်....။
ကျောက်ပြားပေါ် မှာ မအေး ရအောင်.....။
ပြန့်ပြန့် ညီညီ ဖြစ်အောင် စိတ်ကလေးကို ထပ်တူပြု လုပ်ပါတယ်..။
ဆရာလေး တစ်ပါး ဖြစ်ရင် ဘယ်လို နေ မလဲ ဆိုတဲ့ ဘဝ အတွေ့အကြုံကို မေးမြန်းရင်း ခဏခဏ သီလရှင်ဘဝကို စိတ်ကူးယဉ်နေခဲ့တယ်..။
ပရိုဖိုင်း ပုံတောင်စတင်ကတည်းက မပြောင်းရက်ခဲ့..။
ဝေယျာဝစ္စ လုပ်အားရှင်တွေက မနက်ဖြန် ညနေမှာ လာမဲ့ ယောဂီအားလုံးအတွက် တက်ညီလက်ညီ .... စည်စည်ကားကား..မီးဆင်တဲ့သူတွေ ကဆင် အိမ်သာဆေးသူကဆေး..အေးချမ်းလှပါတယ်..။
အချိန်ရတာ နဲ့ ဆရာလေးဒေါ်ဥတ္တရာ ထံ မှ ပဋ္ဌာန ပါဠိ ပဉ္စမတွဲ ကို တောင်းယူကာ ပူဇော် ပါတယ်..။
ဆရာလေးက လက်စွဲသေတ္တာ ထဲကသေချာထုတ်ပေးပါတယ်.. ( မောင်လေး Bliss Vimuttisukha Bliss + Crystal ) တို့ အတွက် သူတို့ကိုယ်စားကျွန်မလှူပေးထားတာ ..စာအုပ်ပေါ်က ရွှေစာလုံး နဲ့ စာတမ်းလေးလည်း အမှတ်တရ... တွေ့လို့ မေတ္တာပို့သ ရင်း ရွတ်ဖတ်ပူဇော် ခဲ့ပါတယ်..။
တစ်နှစ်တာ... ဘတ်စကားမစီးထားလို့ ဝိတ်တက်နေတဲ့ခန္စ္ဒာကို ဆုံး မဘို့ ကျွန်မ ဘတ်စ်ကား ကိုသေချာရွေးစီးပြီး ပြန်ပါတယ်..။
၂နာရီ နီးပါး ရှိတာတောင် မော်တင်လောက်ပဲရောက်တာ နဲ့ Taxi ပြောင်းစီး feel ရောက်..။
ကိုစိုးညီညီ ရဲ့ စေတနာ ကမွန်မြတ်ပါတယ်..။
ကျွန်မရဲ့ အော်ဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်းက ဆင်းထားတဲ့ ဥယျာဉ်ခြံသမားတွေ စိုက်ထားသမျှ အော်ဂဲနစ် ဟင်းသီးဟင်းရွက် များ ကို feel မှဝယ်ပေးမယ် ဆိုပဲ..။
နောက်ထပ်ပိုနေရင်လည်း သူ့ ရဲ့ ၁၅ ဆိုင် က ၂၀၀၀ ကျော် ရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို အော်ဂဲနစ် ကျွေးမယ် လို့ပြောလာပါတယ်..။
ဒီထက် ဆက်ပိုနေရင်လည်း လှူ အုံးမယ် တဲ့..။
ဘိုးဘွားရိပ်သာကို လှူ ဘို့ အော်ဂဲနစ် စိုက်မဲ့ စွမ်းရည်က ဒေါက်တာဇော်မင်းစိန် တို့လို စိတ်ဓာတ်ပါပဲလား..။
ဒီလို လူမျိုးတွေ များစွာပေါ်ပါစေ..။ လေးစားရပါတယ်..။
နောက်ကြားခဲ့တာ...ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ ရဲ့ တပည့်ရင်း ကိုစိုးညီညီ ရဲ့ အလှူ တွေ များစွာ ထဲ မှာ.... ထူးထူးဆန်းဆန်း ရဲစခန်းတွေကို အသားကြက်ဥ၊ မုန့်စတာ တွေ အမြဲလှူတယ် တဲ့..။
ဆိုင်ရှေ့ ယူနီဖောင်း နဲ့ ဖြတ်လျှောက် ပေးတာ နဲ့ တင်ကျေးဇူး တင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်..လာဘ် ထိုးလိုလို့ မဟုတ်ပါ..။
feel လို နာမည် ကြီးဆိုင်တွေရှိသလို တနပ်ကို ၁၀၀ နဲ့ ပန်းရံလုပ်သားတွေအတွက်ရောင်းပေးတဲ့စေတနာဆိုတဲ့ဆိုင်လည်းဖွင့်ထားပါသေးတယ် တဲ့။
ညဘက် ကျွန်မ ရဲ့ လှည်းတန်းဗဟိုလမ်းက အိမ်ကိုအပြန်မှာ တော့ ယာဉ်ကြောလုံးဝမပိတ်ဆုိ့ တဲ့ပြည်လမ်း မှာ ကား ကလျှောကနဲ..။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရှေ့ရောက်လေတော့ ရွှေရောင်ဝင်းပနေတဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်က ကြည်ညိုဖွယ် အတိ..။
ဦးခိုက် ပူဇော်ရပါတယ်..။ ကာယ..စိတ္တ အေးမြပါဘိ..။
ကျွန်မချစ်တဲ့ ရန်ကုန် ..
ကျွန်မရဲ့ ဇာတိ ရန်ကုန် ..ကလှပါတယ်နော်..။
((ဘုန်းဘုန်းရှင်မားရု ကို လျှောက်ရပါအုံးမယ်..။))
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 9:42 PM 1 မှတ်ချက်ရေးရန်
ကိုဦး (ဓမ္မရသ) သို့ မွေးနေ့လက်ဆောင် (2013)
မွေးနေ့ ဆိုတာ မိခင် တစ်ဦး ရဲ့ ဆတ်ဆတ်ခါနေအောင် အနာကျင်ဆုံးဝေဒနာ ကို ခံစားရတဲ့ နေ့ ဖြစ်တယ် လို့ အံတီ တစ်ခါကပြောခဲ့ဘူးပါတယ်..။
ကိုယ့်ရဲ့ ရင်သွေးလေး ပြင်ပလောက ကို ရောက်ဘို့ မွေးထုတ်ပေး ရတဲ့အချိန် ဟာ နာကျင် မှုတွေ ခက်ခဲမှုတွေ….မခံသာ တဲ့ ရင်ဆိုင်မှု တွေကိုကျော်လွှားလွန်မြောက်ပြီး မှ မိခင် ဆိုတဲ့ ရင့်ကျက် တဲ့ဘဝ တစ်ခု ကို ရခဲ့တာ..အံတီကလည်းမိခင် တစ်ဦးမို့ သားနားလည်အောင်ပြောပြတာပါ..။ ကိုးလလွယ် ထားတဲ့အချိန်မှာ လည်း အနေရခက် အထိုင်ရခက်..အစားပျက် အသောက်ပျက်…ငဲ့ညှာ မှုတွေ တစ်ပုံတစ်ပင် နဲ့ အတူ ရှိနေခဲ့ရတာပါ..။
ဒါကြောင့်မို့ မွေးနေ့ ပါတီပွဲတွေ ကျင်းပကြတဲ့ ကလေးတွေကို ( ကိုယ့်စကားနားထောင်တဲ့ကလေးတွေပေါ့လေ) အံတီ အခွင့်သင့်သလို ပြောပြပေးပါတယ်.။
.မွေးနေ့ဆိုတာ..မိခင် တစ်ဦး ရဲ့ ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာကိုနားလည်ပေးတဲ့ ပွဲ။ တန်ဘိုးထားတာတွေ၊ ချစ်ခင် မြတ်နိုးတာတွေ..ကျေးဇူးသိမှတ် ပူဇော်အပ် တဲ့ ပွဲ ဖြစ်သင့် တယ်လို့ လေ..။ ဒါတွေဟာ တကယ် ပဲ ပြုလုပ်ဘို့ လိုအပ်ပါတယ်…သားရေ..။
သားတောင် ဒီအရွယ် ရောက်ပြီဆိုတော့ သားရဲ့ မိခင်ကြီးဟာလည်း ငယ်မူငယ်သွေးတွေ ရှိမနေတော့ လောက်ပါဘူး..။ အိုမင်းနေတဲ့အမေ ရယ်… ဒီအကြောပြိုင်းပြိုင်းထနေတဲ့ လက်ကလေးဟာ..ငါ့ကို ကြင်နာမှု နဲ့ ထွေးပွေ့ခဲ့တာပါလား။ ဒီ ရင်ခွင် ထဲ မှာထည့်ပြီး ချော့သိပ်ခဲ့တာပါလား ၊ ဒီလက် ကလေးတွေ နဲ့ င့ါ အညစ်အကြေးတွေ သုတ်သင် ပေးခဲ့တာပါလား ၊ ဒီပါးစပ်ကလေး နဲ ထမင်းဝါးခွံ့ ခဲ့တာပါလားလို့ တစ်စိမ့်စိမ့် တွေးပေးပါသားရေ..။ ကျေးဇူးတရား ကို စဉ်းစားလိုက်တာ နဲ့ မေတ္တာ ဆိုတာ တစ်စိမ့်စိမ့် ယိုစီးထွက် လာပြီး ပြန်လည် စောင့်ရှောက်လိုစိတ်တွေ ဖြစ်လာမှာပါသား။
အမေ..အမေ..အမေ ရေ လို့ ခေါ်လိုက်ရတာ ခန္စ္ဒာ ကိုယ် ထဲ ကို အင်အားတွေ စီးဆင်းဝင်ရောက် သွားသလို လုံခြုံအေးမြ သွားတာ ခံစားဘူးတယ် မဟုတ်လား။ အမေ..အမေ… ဆိုတာ ခေါ်ရတာ ကောင်းသလောက် ၊ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ရသလောက် အခေါ် ခံရ တဲ့ဘဝတွေဆိုတာ ..မလွယ်လှပါဘူး။
မိခင် ဆို တဲ့ဘဝ တွေ ဟာ အနစ်နာခံမှုတွေ..ပေးဆပ်မှုတွေ… ကြိုးစားရမှုတွေ…မိန်းမသားမို့ တခါတခါ အားလျော့လာတဲ့အခါ မျက်ရည်တွေ နဲ့ တည်ဆောက် ထားတဲ့ ဘဝ တွေပါလားလို့ သားနားလည်ပေးပါ..။ မိခင် ရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ခွေးမတွေ ပြန်ကိုက်တတ်တယ် ကြက် မတွေ ခွေးကို ပြန်မာန်ဖီ တတ် တယ် ဆိုတာ မိခင် စိတ်မှာ စောင့်ရှောက်လိုစိတ်၊ အကာအကွယ်ပေးလိုစိတ်တွေ ကြောင့် ထက်မြက်စူးရှ နေတာလို့ နားလည်ရ ပါတယ်..။
(Mother is 10 times stronger than others) ဆိုတဲ့စကား အံတီ ကြားဘူးတယ်..။ ဒါဟာမိခင် တစ်ယောက် ရဲ့ အားမာန်ကို အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ စကားပါ။ အံတီ မကြာသေးခင် က လုပ်ခဲ့တဲ့ Women in Agriculture Forum မှာတောင် မိန်းမတွေ အကြောင်းပြောပြဖြစ်သေးတယ်..။
အံတီကြားဘူးတဲ့ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ပါ..ခရစ်ယာန် ဘာသာမှာ နိဗ္မာန်ကို ဝင်တဲ့ တံခါးပေါက် မှာ စိန့် ပီတာ ကစစ်မေး ပါတယ် တဲ့..။ ဒီမေးခွန်းကိုဖြေ နိုင်မှသာနိဗ္မာန်ကို ဝင်ခွင့်ပေးပါသတဲ့ ။
အမျိုးသားတွေကို တော့မေးတာ…. ဂေါ့ဒ် ဆိုတာ စာလုံးဘယ်လိုပေါင်းသလဲ တဲ့..။ G….O…D ပေါင်းနိုင်တဲ့ အမျိုးသားက ဝင်သွားရပါတယ်..။ အမျိုးသမီး အလှည့်ကျတော့ ပေါင်းခိုင်း တ့ စာလုံးက Czechoslovakia ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယား ပါတဲ့လေ..။
ဆိုလိုတာက ဘဝ မှာအောင်မြင်ကြတာ ချင်းတူရင် မိန်းမသား တွေ က ပိုလို့ အဆပေါင်များစွာကြိုးစားကြရတယ်….အခက်အခဲပေါင်းများစွာကြိုးစားကြရတယ် ဆိုတာ ကို ပြောတာပါ..။
ဒီလို မျိုးသမိုင်းကြောင်းလေးတွေကို နားလည် ပေးရင် ..အထူးသဖြင့် သူတို့ ချစ်တဲ့ ဘဝရင်နှစ် သားချစ် သမီးချစ် တွေက နားလည် ပေးရင် နှစ်ဦး လုံးချမ်းသာအေးမြ မှာ အမှန်ပါ သား။
အံတီ သားကို အုတ်ကိုမွေးတုန်းက ခံစားချက် ကို သားအတွက် မှန်းဆနိုင်အောင် ဖေါ်ပြချင်မိတယ်..။ သားဖတ်ပြီးသားဖြစ်ပါမယ်.. အံတီ့ ဘလော့မှာ ရေးခဲ့တာလေ..။
မဟာသမုဒ္ဒရာဟာ ရေစက်ငယ် သဖွယ်တဲ့။
ကောင်းကင်ကြီး က အပ်နဖါး ပေါက် လောက်သာရှိသတဲ့။
အမေ ဆိုတာကတော့ မေတ္တာကြီးမားသူမို့ ငါ့ကို သိတတ်ပါနော်..ငါ့ကို ကြင်နာပါနော်..ဘယ်တော့မှ ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးလေ..။
အံတီကလည်း သားရဲ့ မွေးစားမိခင် တစ်ဦးဖြစ်နေတာမို့ မိခင် တွေ ရဲ့ခံစားချက်ကို သားကို ပြောပြရင်း မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်သားရေ..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 9:35 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 2:37 PM 1 မှတ်ချက်ရေးရန်
ဆယ်တန်းအောင်လို့ ပထမ ဘွဲ့ ကို ၅နှစ်ကြာ အောင် သင်ယူပြီးကတည်းက နောက်ထပ် စုစုပေါင်း ၉နှစ်ကြာအောင် ပညာ သင်ယူခဲ့ရသော....ကြိုးစားတည်ဆောက်ခဲ့ရသော ဘဝ ကို မြတ်နိုး မိခြင်းသည် အမှားတစ်ခု..ဘဝသံသရာ ရှည်စေသော ..လမ်းကြောင်းတစ်ခု...၊
ဘဝတဏှာ ..၊ ဘဝ ရဲ့ အတ္တမာန ၊ နဲ့ ဘဝဒိဋ္ဌိကြိုး ၊ကို ပိုမို ခိုင်မာစေတဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်း ဆိုတာ ကျွန်မ အရင်က မသိခဲ့ပါ..။
ဝင့်ဝါ လိုခြင်းမရှိသည့်တိုင် အသိအမှတ်ပြုတာလေးတော့ လိုချင် မိခဲ့ပါ တယ်..။
ဒါတွေ မလိုချင် ပါဘူး..အရေးမကြီးပါဘူး လို့ ကျွန်မကပြောခဲ့ရင် ဒါဟာ ညာတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..။
ဘဝ တဏှာ ရှိနေသေးတာ အထင်အရှားပေကိုး..။
အပါယ် မကျရင် ပဲတော်ပါပြီ ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ကလေး နဲ့ တရားရိပ်သာ ကို ဧည့်သည်သွား၊ဧည့်သည်စားဖြင့် အချိန် တပိုင်းတစ မျှသာ ဖဲ့ဖဲ့ပေး တတ်လေသော ချိနဲ့နဲ့ သဒ္စ္ဒါ တရား ကိုသာ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေသကိုး..။
လက်ရှိဘဝကို လွှတ်မချနိုင်သေး...လက်ရှိအချိန်ကို မခွဲဝေနိုင်သေး... လက်ရှိ အနေအထားကို မဖျက်ပစ်နိုင်သေး..။
စီမံကိန်းဖျက်.... အချိန်ပျောက်ပတ်ဝန်းကျင် ပျောက်စေသော ဝိပဿနာ ဥာဏ်သည် နုံနဲ့ လွန်းစွပါတကား..။
ဒေါက်တာ..ဒေါက်တာ.... တာချင်းတူသော်လည်း ထွက်သက် ရဲ့ အဆုံး မှာ ပြိတ္တာ ဟူသော တာ..တစ်တာ..ရှိချင်လည်း ရှိနေနိုင်တာပါပဲ..။
ဆရာမ..ဆရာမ......ဆိုသော်လည်း ထွက်သက်တစ်ချက် ရဲ့ အလွန်မှာ....မသာမ ဆိုကာ..မ ရရှာပါလိမ့်မယ်..။
ဘဝ ဟာ မနက်ဖြန်လား သဘက်ခါလား။ မကြာခင် လား ထွက်ခွာ သွားရလိမ့်မယ်...။
ကြိုတင်သိပြီး ထားလို့ ပြင်ဆင်ချိန် ရချင်မှလည်း... ရပါလိမ့်မယ်...။
ရုတ်တရက် ကောက်ခါငင်ခါ ဆိုသလို မျိုးလည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..။
အသိုင်းအဝိုင်းအခြံ အရံ တွေ ရှိနေချိန် လည်း ဖြစ်ချင် မှ ဖြစ်ပါမယ်...။
တစ်ဦးတည်း ညိမ်သက် တိတ်ဆိတ်နေချိန်လည်း ဖြစ်နိုင်တာပါပဲ..။
အမှောင် နဲ့ ပိန်းပိတ် နေတာမျိုး..။
ရေတွေ မီးတွေနဲ့ မွန်းကြပ် ပိတ်ဆို့နေတာမျိုး..။
လင်းလက် ကျိန်းစပ်နေတာမျိုး ..။
လေထဲ...လွင့်ဝဲ ကျလာ တဲ့ ကြယ် ကြွေ တစ်ပွင့်လို မျိုး....။
တစ်မျိုး မဟုတ် တစ်မျိုး ..တစ်မျိုးမျိုး နဲ့ လျောင်းထိုင် ရပ် သွား..လေးပါေးသာ အနေအထား တစ်မျိုးမျိုး နဲ့ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန် တစ်နေရာရာ ဆိုတာတော့ အသေအချာပါ..။
နှလုံးသွင်းတယ် ဆိုတာကတော့ တွေးတာပါပဲ ...စိတ်အစာ စားခြင်း တစ်မျိုးလို့ ကျေးဇူး တော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဘုရားက အလုပ် နဲ့ ယှဉ်တဲ့ စကားလုံး ကို မှတ်မှတ်သားသား ဆင်ခြင်ရပါတယ်..။
ကျွန်မ အတွက် အလုပ်လုပ် လုပ်နေချိန်မှာ... စိတ်အစားစားခွင့်ရရင် တော့ ဒီစိတ်အစာ ကို အပြည့်အဝ စာသုံးပါတယ်..။((သေရမှာ အသေအချာ..မကြာခင်..)) ဆိုတဲ့ စိတ်အစာပါ..
ဘယ် ဘဝ ရရ.*.ပြုံးရယ် မဲ့ငို..ချစ်မုန်းပို *တဲ့...ဒီထက် ပိုတဲ့ ခံစားချက် ရှိပါသလား..။ မရှိပါ..။ဘာများထူးဆန်းနေရအုံးမည်နည်း..။
ပြုံးခြင်း... ရယ်ခြင်း...မဲ့ခြင်း..ငိုခြင်း..ချစ်ခြင်း..မုန်းခြင်း စတာတွေထက် ပိုတဲ့ စာရင်း မရှိသေးပါ..ဒီစာရင်းထဲ မှာ ပဲ နှလုံးသားလေးက မြုပ်တစ်ဝက် ပေါ်တစ်ဝက် လှည့်လည် နေကြရတာပါ..။
တဏှာ..ဥပါဒါန်...ကံ ဖြစ်ပြီး ဒေါသ ကာယကံ၊ ဒေါသ ဝစီကံ..ဒေါသ မနောကံတွေ ဖြစ်ကြရတာ...။
.နေ့စဉ်ကျင်လည် ရတဲ့ ဘဝ ကို အပါယ် မကျအောင် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းတွေ ကင်းမဲ့ရတော့တာပါ..။
တက္ကသိုလ် ဆင်စွယ် နန်းတော် တဲ့....တက္ကသိုလ် ဆရာမ ဆိုတာ ဆင်စွယ်နန်းတော် ထဲကလို ဟန်ကျပန်ကျ.. မရုန်းကန်ရတော့တာအမှန်ပါ..။
ဒီလို ဘဝ ထဲက နေ ခံယူချက် တစ်ခု ဖြင့် ရွှံတော့ဗွက်တော.... လယ်တော..ယာတော ထဲ ဆင်းခဲ့သော ကျွန်မ သည် တခြား သူ က ဘယ်လို ဝေဖန်ဝေဖန် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး စကားလုံးများ ဖြင့် ခံနိုင်ရည် ရှိခဲ့သော်လည်း .........
မမျှော်လင့်ထားတဲ့ နယ်ပယ်...ရိုသေလေးစား တဲ့ တပည့်များရဲ့ အဝန်းအဝိုင်း ထဲ မှ သနားစဖွယ် လူတစ်ဦး လို အထင်သေး လှစွာသော မှတ်ချက်မျိုး ရုတ်တရက်ပေးလာခဲ့လျှင် ကျွန်မ ယိုင်နဲ့ ပြိုလဲ ရတော့ တာ.ဝမ်းနည်းအားငယ် ရတော့တာ..။
ဒေါသ အပူလှိုင်း ရဲ့ရိုက်ခတ်ချက် နဲ့ လောင်မြိုက်ရတော့တာ..။
ဘုန်းဘုန်းက ဆုံးမထားတယ်... ဘာကြောင့်ပူပူ..ကိုယ်ရှုံးတယ် တဲ့..။
ဒေါသ နဲ့ ယှဉ် တဲ့ ကံ မြောက် ခဲ့ရင် အကုသိုလ် ဖြစ်ပြီး ရှုံးရတော့ တဲ့အတွက်...အမြတ်မထွက်တော့တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် လို့နားလည် ရပါတယ်..။
ဒေါသ နဲ့ ယှဉ် တဲ့ ကံ မမြောက် ရင် မရှုံးတော့ပါဘူး တဲ့..။
ကျွန်မ ဘယ်သောခါ မှ မရှုံးချင်ပါ..။
ကိုယ် သိထား၊လေ့လာထား၊ ကျင့်ကြံအားထုတ်ထားသော သော တရား ဓမ္မ ရဲ့ ဆုံးမ မှု ကြောင့် ကျေနပ်မှု တစ်စုံတစ်ရာဖြင့် တည်ကြည် ညိမ်သက်စွာ ပြုံးပြီးသာ နေချင်ပါတယ်...။
တကယ်တော့လည်း .... အခုနေသေရင် အကုန်တန်းလန်း ထားခဲ့ရမှာ...။
ကျွန်မပြုခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်က နွားခြေရာနောက်ကလှည်းဘီးလို..ကျွန်မပြုခဲ့ဘူးတဲ့ ကုသိုလ်က အရိပ်လို လိုက်ပါ မှာကလွဲပြီး ကျန်တာမှန်သမျှ ...ထားခဲ့ရမှာ......အသေအချာ.....။
မုန်းသူတို့ လည်း မုန်းပါစေ.....ချစ်သူတို့ လည်းချစ်ကြပါစေ...။
ဒါပေမဲ့ အားလုံးရဲ့ အမုန်းနဲ့ အချစ်များ အားလုံးကိုပေါ့နော်.။
မာန၊ အာဃာတ၊ဒေါသ၊နောင်တ ကျွန်မ ဘာမှ ယူမသွားဘူး ဆိုတာကို တော့ မှာထားခဲ့ချင်ပါတယ်..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 2:50 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 9:31 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
မနေ့က GMP Good Manufacturing Practices ကိုလေ့လာ ဘို့ အတွက် Beta Grow ဆိုတဲ့ ဝက်သားထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတစ်ခု ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်...။
ဝက်ခေါင်းဖြတ်တာ မကြည့် လိုတာ နဲ့ အခန်းထဲမှာ ကျန် ရစ်လိုက်ပါတယ်....။
စက်ရုံမှူးက မကြည့်ရမှာစိုးတယ် နဲ့ တူပါတယ်.... ဗီဒီယို ကင်မရာ နဲ့ချိန် ထားတာကို သေချာ ပရိုဂျက်တာ နဲ့ ထိုးပြတော့ လည်း မကြည့်ချင် မြင်လျက်သားပါပဲ..။
သတ်ခါ နီးဝက်တွေကို မသတ်ခင် ဆီးလည်းစစ်..သွေးလည်းစစ်...
ကားပေါ်က ချတော့ ၂နာရီ တိတိ ရေပန်း ဖွင့်ထားတဲ့အခန်းမှာ အေးအေးဆေးဆေး ထားပေးတယ်..စိတ်ပျော် စိတ်အေးအောင်လို့ တဲ့...။
ပြီးတော့ မှ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား လိုင်းကို လွှတ် လိုက်တာ.... ဦးနှောက် သေသွားပါသတဲ့ ဝက် ကိုမာ ရသွားတော့မှ ခြေထောက်ကတန်း လန်း ဆွဲ ပြီးစီတန်းကာ စက်ထဲ ဝင်ရရှာပါတယ်..။
နောက်ဆုံး လှီးဖြတ်ရလွယ်အောင် အအေးခန်းမှာ နာရီ ၂၀ ထားပြီး ထက်ခြမ်းခွဲ ထွက်လာ ...
နောက်ဆုံးတော့လည်း ဥရောပကို ပို့ဘို့ ထုတ်ကုန် တစ်ခု ဖြစ်သွားတော့တာ..။
ပထမ ကြည့်ရင်း နဲ့ ထိတ်လန့် မိသော်လည်း.......ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဘုရားကြီးဟော ခဲ့ ဘူးတဲ့ ( နွားအဖြူ တစ်မျိုးထဲ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘဝကိုပဲတွေးပါတဲ့..အသတ်ခံလို့ ကျခဲ့တဲ့ သွေး တွေ နဲ့ သမုဒ္ဒရာ ခုနှစ်စင်း...ဘယ်ဒင်းကများလဲ ဆိုတော့..သွေးကများသွားပါလိမ့်မယ် ) လို့ဖြေကြရပါတယ်တဲ့..။ တရားကို သွားသတိရမိပါတယ်။
ဒီတရားကို သတိရ မိသွားတာ နဲ့ ဒီဝက်တွေ နေရာ မှာ ကိုယ် ဘယ်နှစ်ဘဝ ရခဲ့ဘူးသလဲ ရယ်လို့ အထိတ်တလန့် သံဝေဂ ဖြစ်ရပါတယ်..။
ဝက်တွေကလည်း ရှေ့ မှာ လျှပ်စစ် စက်တွေ အမွှေးမီးမြှိုက်စက်တွေ..ခေါင်းဖြတ်စက်တွေ စောင့်နေမယ်ဆိုတာ မသိကြသလို ကျွန်မ တို့လည်း သေခြင်းတရားကို မေ့နေတတ်ကြတာ..။
သေရင် ပါသွားမဲ့ ကုသိုလ် အထုပ် ကို မဖြည့်မိ....သေရင် ချန် ထားရမဲ့ ပစ္စည်းထုပ်တွေကို သာ မဲပြီးဖြည့်ဆည်းနေကြတာ....။ သံသရာ ဆုံး ပါတော့မလား...။
လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီးကတော့ ဒီလို ဆုံးမတော်မူပါတယ်..။
*နင့်ရုပ်နင့်နာမ်၊ နင့်သဏ္ဍန် ဝယ်၊
နင့်ဥာဏ်မစူး ၊ အပေါ်ဖြူးလျှက်၊
(ရူးရူးမေ့မေ့) မူးမူးမေ့မေ့ ၊ အများလေ့ဖြင့်၊
နေ့ရက် အကုန် ၊ လွန်ခဲ့တုံပြီ။
အာရုံကိုထု ၊ အစုစုဖြင့်
ယုယုယယ ၊ နင်ကြောင့်ကြ လည်း
မရဏသေမင်း ၊ သူ့ဓာတ်နင်းက
မညင်းဆန်သာ ၊ နင့်ခန္ဓာ သည်
ပြာပုံအပြီး ၊ ဖြစ်လုနီးပေါ့။
ရီးတီးရားတား ၊ သေ၍သွားသော်..
တရားမကြွယ် ၊ အထုပ်ငယ်လျှက်
အပါယ် စခန်း ၊ သွားမြဲလမ်း၌
တစ်ပန်းဟိုက်ဟိုက်၊ တစ်ရှိုက် ငင်ငင်
တငြင်ငြိုငြို ၊ ဆင်းရဲပိုလျှက်
အပါယ် ထိုထို ၊ ဥဒဟို သည်
နင်လို လူမိုက် ၊ သွားလမ်းတည်း။
ကျွန်မ မှာ မရဏ တံခါးကို ဝင်ဘို့ အသင့်ဖြစ်ပြီလား ..။
တစ်ပန်းဟိုက်ဟိုက်၊ တစ်ရှိုက် ငင်ငင် ..ပဲလား...
မရဏသေမင်း ၊ သူ့ဓာတ်နင်းက၊ မညင်းဆန်သာ ၊ ကိုယ့်ခန္ဓာ ဆိုတာ ဝက်တွေလိုပါပဲလား လို့ သံဝေဂယူရင်း..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 6:05 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ယင်ကောင်နားရာ..ပျားမပါ..၊ ပျားသကာတို့ ချိုမြိန်စေ…(ဘုန်းဘုန်း အရှင်တိက္ခဥာဏာလင်္ကာရမွေးနေ့ပူဇာ)
by ThanThan Sein (Notes) on Tuesday, May 28, 2013 at 8:06pm
((((ယင်နား ရာ ပျားပါမည် မဟုတ်ချေ)))) ဆိုတဲ့ စကားကိုမိန့်ဆိုခဲ့တာကတော့ ကျေးဇူးတော် ရှင် မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော် ဘုရားကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
လူသားတို့နဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသားအင်းဆက်တွေ ဖြစ်တာ မို့ လည်း ပျားဆိုရင် အလုပ်လုပ်တယ်..စည်းလုံးညီညွတ်တယ်….။ စည်းကမ်းရှိတယ်..သစ္စာလည်းအင်မတန် ရှိတယ်..သဘာဝ အသိတရားရှိတယ်..။ အများ နဲ့ စုပေါင်းနေတတ်တဲ့ သဘာဝ မို့ ကြိုတင် အလုပ် ကြိုးစားမှုလည်း ရှိတယ်..မခို မကပ် ညီညီ ညွတ် ညွတ် အလုပ်လုပ်ကြတယ်..လမ်ဘေးက အမှိုက်ပုံ ယောင်လို့တောင်မနား..ပန်းဝတ်ရည် တွေ စုတ်ကြတော့တာ။ အဘိုးတန် ဆေးဘက်ဝင်ပျားရေကို စုဆောင်း ဖေါ်စပ်ပေးတဲ့ အကျိုးပြုဆင်းဆက် လို့ လူတွေက နားလည် ကြတာပါပဲ..။
ယင်ဆိုရင်တော့တစ်ဝီဝီ တစ်စီစီ နဲ့ အညှီအဟောက်ကိုလည်းကြိုက် ရောဂါလည်းသယ်..ဆောင်လာတာ မျိုးဆိုတော့ယင်သည် မုန်းစရာ အင်းဆက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။ တစ်ရုန်းရုန်း တစ်အုန်းအုန်း နဲ့ ကြုံရာနားကြုံရာစား ဆိုတဲ့ အင်းဆက်မျိုး…ယင်နားစာ မစားနဲ့..ယင်ကောင်ဆို အလုံးဝ အယုံအကြည်မရှိတဲ့ပိုလျှံ သတ္တဝါ ပဲ လို့ ယောဆရာတော် ဘုရားကြီးက မိန့်ဘူးပါတယ်..။
ဒီအင်းဆက်တွေလိုပဲ..ကျွန်မတို့ လူတွေမှာလည်း အကျင့်စရိုက်ကို လိုက်ပြီး တူရာစုကြတာ လောကထုံးစံတစ်ခု လိုပါပဲ..။ လမ်းတူရင် လူချင်းတွေ့ မယ် ဆိုတဲ့ ကဗျာ ဆရာတစ်ဦးပြောဘူးသလို..ဦးတည်ချက် တူသူတွေ ဟာ လမ်းကြောင်း တူတူ လျှောက်လှမ်းနေကြတော့ အထီးကျန် မဖြစ်….ချစ်ချစ်ခင်ခင်..ယိုင်းပင်းကြတာ…ဒီကုသိုလ်လမ်းပေါ်မှာပေါ့..။
ဟို တစ်နေ့ကတော့ကျွန်မ မှာ မိုးညှင်းသိဂီင်္ ကျောင်းမှ ဆရာလေး ဒေါ် သုဓမ္မစာရီ (ဒေါက်တာ မသီတာ)က ဒကာမ ကြီးရယ်ဆရာလေးထီးလိုချင်တယ်… ဓမ္မာရုံထဲ က ဘုရားကြီးကို ပူဇော်ချင်လို့ပါတဲ့ ..။ဒကာမကြီး ထိုင်းသွားတဲ့အခါထိုင်းနိုင်ငံလုပ် ထီး ကြီးကြီးပြန့်ပြန့် လှလှပပ နှစ်လက် ဝယ်လာ ခဲ့ပါတဲ့..။
တကယ်တော့ထိုင်းနိုင်ငံ အရှေ့မြောက် ဘက် က ကောင်းကန် တက္ကသိုလ် ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ မဲခေါင်အင်စတီကျူမှာ သင်တန်းတက်ရမဲ့ ကျွန်မ က ဘန်ကောက် နဲ့ ဝေးကွာ မှန်း သိနေခဲ့သော်လည်းဆရာလေး ရဲ့ပါရမီ ဖြည့်ချင်တာ နဲ့ ကတိ ပေးခဲ့ မိပါတယ်…။
ဘုရားရှင်ကို အထူးတစ်လည်ကြည်ကြည်နူးနူးမြတ်မြတ်နိုးနိုးပူဇော် ဦးခိုက်လိုသူတွေကတော့ ပူဇော်စရာပစ္စည်းတွေ မျိုးစုံစိတ်ဆန်းကြယ် ရင် ကြယ် သလို…ရှာဖွေစဉ်းစားလှူဒါန်း နေကြတာပါပဲ..။ ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရား ရဲ့ ကျေးဇူးဂုဏ်ဆိုတာကလည်း အနှိုင်းမဲ့ဆိုတော့ ကျေးဇူးသိလေ..ပူဇော်ချင်လေလေပါပဲဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာနိုင်ကြပါမယ်..။
ဒီလိုနဲ့ကျွန်မတို့ မြန်မာတစ်သိုက်က ကောင်းကန် မြို့က ဘန်ကောက်ကို အဝင် သာလာ ထိုင်းဈေးမှာဆင်းကြပါတော့တယ်..။ သာလာထိုင်းဈေး မှာ ထီး ဝယ်တော့ ကျွန်မ ဆိုခဲ့တဲ့ ယင်ကောင်..နဲ့ပျားဥပမာ လို..ကုသိုလ် စိတ်ရှိသူ တွေ ကံချင်းဆုံရပါတော့တယ်..။
ကျွန်မ နဲ့လိုက်ပါလာ တဲ့သူတွေက တက်တက်ကြွကြွ ရှိသလို…. မြန်မာ ပြည်ကနေ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ညီအမ လေးနှစ်ယောက်ကဝမ်းသာအားရ ကျွန်မ အနားကပ်လာပါတယ်..။ မနိုင် နဲ့ ယမင်း ဆိုတဲ့ ညီအမ နှစ်ဦး ဟာ သာလာထိုင်းဈေးမှာပန်းဆိုင်ကြီးတစ်ခု ရဲ့ လခစားဝန်ထမ်းတွေ ပါ..။
လွန်ခဲ့တဲ့၁၀ နှစ် ကျွန်မ အေအိုင်တီမှာကျောင်းတက်စဉ် ကာလ ကတည်း က ဘုရားပန်းဝယ်မှု အကြောင်းပြုခင်မင် ခဲ့တဲ့ ပျားလေး နှစ်ကောင်ပေါ့..။ ၂၀၁၁ မှာ ကျွန်မ အေအိုင်တီသို့ ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကို ပင့်ဆောင်စဉ်ကလည်း တရားပွဲ မှာ ကျွန်မ စိတ်တိုင်းကျ သစ်ခွပန်းများ လှူလိုတယ် ဆိုတာ နဲ့ သစ်ခွ ပန်း ၁၆ အိုးတိတိ ထိုးပေးခဲ့တာ အပြင် တရားနာ လာ တဲ့သူတွေကို သစ်ခွပန်း တစ်စည်းမက ပေးလှူနိုင်ခဲ့ဘူးပါတယ်…။ အော် အခု လည်းပြန်ဆုံ ရတာအတိုင်းမသိဝမ်းသာ မိ တာ အမှန်ပါ..။
ကုသိုလ် ကယူဆောင်ဖန်တီး ပေး တဲ့ ဘဝ မှာ လခစားအလုပ်သမား တွေ ဘဝကနေ…ပန်းဆိုင် တစ်ဆိုင် ဝယ်ယူရောင်ချနိုင်တဲ့ပန်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်..။ ယောဆရာ တော်ဘုရားကြီး ရဲ့ စကား နဲ့ပြောရရင်ဘဝ ပန်းဝတ်ရည် ကို ဒါန၊ သီလ ဘာဝနာပေါင်းပြီး ဘဝသည် ချိုမြိန် သော ပျားရည် ဖြစ်ခဲ့ပြီ..။အဘိုးတန် ဆေးဘက်ဝင်သော ပျားရည် ဖြစ်ခဲ့တာ…. ပဲလို့ ကျွန်မ ဝမ်းသာအယ်လဲ သုံးသပ် ရပါတယ်..။
ထင်တဲ့အတိုင်းပဲပျားတွေ ဆိုတော့လည်း ထီး နှစ်လက် ဝယ် တဲ့ အခါ တစ်လက် လှူဒါန်းခွင့်ကို သူတို့ကိုပေးပါတဲ့..။သေသေသပ်သပ်ထုပ်ပိုး ပေးလိုက် တဲ့ ကုသိုလ်..ချိုသာအေးမြ တဲ့စကား တွေ ပြောဆို ဧည့်ခံတဲ့ကုသိုလ် တွေ ယူတတ်လိုက်တာ…။
အဲဒီကျ မှသယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ် သာ လှူ ဘို့ကျန်တာ မို့ ကျွန်မတို့ မဲခေါင်အဖွဲ့ က အမ ဒေါ်နန့်ကြူကြူသင်းနဲ့ ဦးအောင်မြင့်ကျော် တို့ က သူတို့ ရဲ့ အမေ တွေ လှူ နိုင်အောင် လက်ဆောင် ၊ ပီတိဖြစ်စရာ လက်ဆောင် အဖြစ် နှစ်လက် ထပ်ဝယ် ကြပါတယ်..။ ညီညွတ် တဲ့ကုသိုလ် ဆိုတာ ကောင်းကျိုး ဆင့်ဆင့် မြင့်တက်စေတော့တာ ကျွန်မ မှာလည်းပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်..။ ယောဆရာတော် ဘုရားကြီးကတော့ ဓာတ်ကောင်းတွေကူးတာ တဲ့..။
ပီတိ တွေ နဲ့ ပြန်လာ တဲ့ကျွန်မ မှာကျွန်မ ရဲ့ဓမ္မ ဘလော့ဂါ ဘုန်းဘုန်း အရှင် တိက္ခဥာဏာ လင်္ကာ ရ ရဲ့ မွေးနေ့ (၂၇.၅.၂၀၁၃) ကလည်း နောက်တနေ့ မှာကျရောက်နေတာ ဆိုတာ မမေ့ခဲ့ပါဘူး..။ တိုက်ဆိုင်နေတော့လည်းဘုန်းဘုန်း ကို အမှီပြုပြီးကျွန်မ ကုသိုလ် တိုးပွားခွင့်ရခဲ့တာကို ပြန်လည်အမှတ်ရမိပါတယ်..။
ဘုန်းဘုန်းကို ကျွန်မတို့ အွန်လိုင်းဓမ္မ စာပေရေးသားသူ ဆရာ ၊ ဒကာ ရင်းတွေ အဖြစ် လွန်ခဲ့ တဲ့ ငါးနှစ်ကတည်းက လေးစားခင်မင်ခဲ့ကြတာပါ..။ ဘုန်းဘုန်း မွေးနေ့ ရောက်တိုင်းလည်းကျွန်မ ဓမ္မပူဇာကဗျာ ရေးသား ခဲ့ပါတယ်..။
ကျွန်မတို့ဓမ္မဘလော့ဂါ များ ရဲ့ စုပေါင်းနာယူကြ တဲ့ အွန်လိုင်း တရားပွဲကို Skype ကဆင့် ပထမဦးဆုံး ဟောပြော ဆုံးမ ခဲ့ဘူး တာကလည်းဘုန်းဘုန်းဦးတိက္ခဖြစ်ပါတယ်..။ ကျွန်မ တို့ မေးတဲ့မေးခွန်းတွေစိတ်ရှည် လက်ရှည် မေတ္တာ အပြည့် ဖြေကြား ခဲ့ ပေးပါတယ်..။
အဲဒီအချိန်က ဘာသာ သာသနာ မထွန်းကားတဲ့နေရာမှာ တစ်ဦးတည်းနေထိုင်ရတဲ့ ကျွန်မ အတွက် ကတော့ အားထားမှီတည် ရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။မေတ္တာ ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် အေးအေးမြမြ ပို့တတ်အောင်သင်ကြားပြောပြ တာကိုတော့ကျွန်မတို့အားလုံးအမှတ်တရဖြစ်ခဲ့ ဘူးပါတယ်..။
ပျား တွေ မို့ ပျားအုံဆောက်တာ… ပျားရည် လုပ်တာ..ပန်းတွေဆီ ပျံဝဲ ကျက်စားတတ် တဲ့ ဥပမာ စကားကို အခု မှ ပိုမို ထောက်ခံ နားလည် ရပါတယ်..။ ဘုန်းဘုန်းမြန်မာပြည်ပြန်လာ တဲ့အချိန်မှာတော့ ဆွမ်းချိုင့်ပေးပို့ရင်း ဘုန်းဘုန်းစာသင်သားဘဝ မှာ စာပေသင်ယူခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအေးမဟာ ဂန္ဒ္စာ ရုံကျောင်းတိုက်ကို ရောက်ရှိပူဇော်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်..။
ဘုန်းဘုန်းရဲ့ ဆရာ ရင်း ပိဋက နှစ်ပုံခွဲဆောင် ဆရာတော် အရှင် ပညာဝံသာလင်္ကာရ ကို ဖူးမျှော်ကြည်ညိုရသလိုစာသင်သားသံဃာတော် တွေ ရဲ့ ဘဝ ကို ပိုမို နားလည် ခွင့်ရခဲ့တာ..ဘုန်းဘုန်း ဦးတိက္ခ ရဲ့ကျေးဇူး ကြောင့်ပါ..။ ဘုန်းဘုန်း ကိုယ်စား ဘုန်းဘုန်း ရဲ့ ဆရာတော်ကို တစ်လ မှာနှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ် နှုန်း ဆွမ်းပို့ လှူဒါန်း ခွင့် ရသည် မှာ ယနေ့တိုင်မို့ ဒီကုသိုလ် ပြုတိုင်း အမေရိက ရောက် ဘုန်းဘုန်းဦးတိက္ခ ကို သတိရ မေတ္တာပို့သ မိပါတယ်..။
နောက် ပြီးကျွန်မ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျေးလက်ဒေသ ပညာ ပေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဘုန်းဘုန်းက အမေရီက ကနေ ပါဝင်ကူညီခဲ့ပါသေးတယ်..။ ဂန့်ဂေါ နယ် မှာ သင်တန်းဖွင့်တော့သင်တန်း ကုန်ကျစရိတ် အားလုံးကို ဘုန်းဘုန်းက ပေးပို့လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်..။ ဒီလိုအားဖြည့်ကူညီ မှုကြောင်း ပဲ ကျွန်မလည်း ပုံတောင်ပုံညာကိုကျော်ယောနယ်ကို ရောက်ခဲ့ ရ..ဘူးပါတယ်..။
ယောနယ် ကယောဆရာတော်ဘုရား၊ မုံလယ်တောရ ဆရာတော်ဘုရား၊ ကျောက်ဂူတောရ ဆရာတော် ဘုရား စတဲ့ ဆရာတော်အကျော်အမော်တွေ ပေါ်ထွက်တဲ့ နေရာ ဆိုတော့ ဘုန်းဘုန်း ဦးတိက္ခ လည်း သူတော်ကောင်းဓာတ်ခံ အားကောင်းခဲ့တာပိုလို့ယုံကြည်ရပါတယ်..။ ယောနယ် မှာ ဖွင့်ခဲ့တဲ့ သင်တန်းကတော့ ယနေ့အထိ ကျွန်မ ဖွင့်ခဲ့ဘူးတဲ့သင်တန်းတွေ ထဲမှာ စိတ်အဝင်စားဆုံး၊ ဧည့်ဝတ်အကျေပြွန်ဆုံး၊ သင်တန်းသားဦးရေ အများဆုံး စံချိန် တင်ထားခဲ့ရတာ ယနေ့တိုင်ပါပဲ.။
မေတ္တာပြည့်ဝတဲ့ဘုန်းဘုန်း အခု ရောက် ရှိသီတင်းသုံးနေတဲ့ မင်နီဆိုတာ ကဒကာ တွေ ဒကာ မတွေ ကံကောင်းကြတယ်လို့ကျွန်မ ကဆိုချင်ပါတယ်..။ ပြီးတော့လည်း သားအရင်းသဖွယ် ဂုဏ်ယူမြတ်နိုးတတ်တဲ့ ၊ကူညီတတ်တဲ့..စိတ်ထားကောင်းတဲ့ဓမ္မပါလ ဆရာဦးအောင်ကိုး တို့လို… ကျောင်းဒကာ ကြီးက သားရဟန်းအဖြစ် သိက္ခာထပ် တယ် ဆိုတော့လည်းနှစ်ဦးနှစ်ဘက်လုံးအတွက် ကျွန်မ က ကျေနပ်ဝမ်းသာရပါတယ်..။
တကယ်တော့လည်းဘယ်နေရာမှာ နေနေ ကမ္ဘာ့ ရဲ့ အလှက ဓမ္မ ပါပဲ..။ လို့ ယော ဆရာတော် ဘုရားကမိန့်ဘူးပါတယ်..။ဓမ္မ ရှိတဲ့နေရာ ဟာ အလှရှိတဲ့နေရာ ပါပဲ..။ ဓမ္မဆိုတဲ့ပျားတစ်အုံ ကို ဝိုင်းအုံ နေထိုင် ဆောင်ရွက် ကြ သူတွေကလည်း ကောင်းမှု မြတ်နိုး ၊ကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ပျားတွေ လို ကျွန်မ ရဲ့ ဓမ္မ မိတ်ဆွေ များကို ကျွန်မ က ချစ်ခင်မြတ်နိုးတန်ဘိုးထား ရပါတယ်…။
ကိုယ် ရရှိထားတဲ့ ဘဝ ထဲမှာ ပျားတွေလိုပဲ..ပန်းကိုသာရှာတတ်မယ် ဆိုရင် ဘာတွေပဲ ကြုံကြုံ ကုသိုလ် ဆိုတဲ့ ပျာရည်ကို ရှာဖွေ စုဆောင်းတတ်မှာအမှန်ပါ။
ဒီလို ဓမ္မ အသိုင်းအဝိုင်းမျိုးမှာကုသိုလ် ဖြစ်ခွင့် ကလွဲ လို့ ဘာတွေ ရှိနိုင်အုံးမှာ လဲ..။
ကုသိုလ် ဖြစ်ခွင့်က တဆင့်ပေးစွမ်းလာ တဲ့ မဂ္ဂင် လမ်းမှာလည်း..ဝိသုဒ္စ္စိ္ဒ ကနေ ဝိမုတ္တိ ခရီးစဉ် ဆိုတာ မကွေးမကောက်ဖြောင့်တန်းရောက်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ ကတော့ ယုံကြည် မြဲပါ..။
ဒီစာစု လေးဖြင့်၂၇.၅.၂၀၁၃ မှာ ကျရောက်တဲ့ ဘုန်းဘုန်း အရှင် တိက္ခဥာဏာ လင်္ကာရ ရဲ့ ၃၅ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကိုပူဇော် ကန်တော့အပ်ပါတယ်..။
အမေရီကန်နိုင်ငံ ၊မင်နီဆိုတာ ပြည်နယ် ၊သီတဂူ ဝိဟာရ မှ ဘုန်းဘုန်း အရှင် တိက္ခဥာဏာ လင်္ကာရ (ယောအသင်းဓမ္မဘလော့ဂါ၊Lotus Foundation ) သည် သူတော်ကောင်းတို့ အားသူတော်ကောင်းတရားတို့ ဟောကြား ဦးဆောင်လမ်းညွှန်နိုင်ပါစေ..။ ယနေ့မှ စပြီး ကျန်းမာချမ်းသာပါစေရန် ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သအပ်ပါတယ်..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 6:02 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
မျဉ်းဖြောင့်တစ်ကြောင်း လို တန်းတန်းမသွား တဲ့ ဘဝ ဆိုတာ
အီးစီဂျီ စက် ထွက်တဲ့အဖြေ စာရွက်မှာလို....
တက်လိုက် ကျလိုက် နဲ့....တုန်ခါ နေခဲ့ဘူးတာဆိုတော့လည်း....
တည်ညိမ်ဖြောင့်တန်း ခြင်းကို အလွမ်းစာရင်း မသွင်းလိုတော့ပါဘူး..။
ဆယ်စုနှစ် ငါးခုတာ ကို လ များများ စွန်းခဲ့တဲ့ နှလုံးသားဟာ
အရင်က တော့ ထုံဆေးပေးခံရသလို.....
အလိုက်သင့်လက်ခံ...ပုံမှန် တဲ့ နရီ စည်းချက် နဲ့
ခပ်သွက်သွက် ကလေး.... အပြေးနှင်လျက်....
ခရီးဆက် နေတာ.... တကယ်တော့...
တာဝန် တစ်ရပ် ထက်တော့ မပိုပါဘူး.....၊
မာန ဆိုတာ ကို သယ်ဆောင်လာမယ် ဆိုရင်တော့.....အဲဒီ အောင်မြင်မှု ၊ ကြော်ကြားမှု တွေ..ဘယ်လိုပဲတောက်ပရွှန်းလက်နေပါစေ..... ငါမလို ချင်တော့တာလည်းအမှန်ပါပဲ..။
ယစ်မူး ပျော်မွေ့..ဘဝမေ့စေမယ် ဆို ရင်လည်း၊ မြှောက်ပင့်ခစား၊ အခြံအရံများလည်း
သံဝေဂ နဲ့ ဘဝအမြင်....၊ထင်ဟပ် ညိမ်ကျ..၊
နှလုံးအိမ် မှာ အေးမြစေမှု ကို လှုပ်ရမ်း ဆူပွက် စေမဲ့
ဘဝအမြင် ..စိတ်အမြင် ရဲ့ ကြည်လင်ခြင်းဖြင့်နေပါရစေ..။
နှောင်းနောင်တ တွေ မလိုချင်.....၊
ကုသိုလ် ဖြင့်ပင်...ခရီးနှင် လျက်၊
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 10:02 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 8:41 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 6:43 PM3မှတ်ချက်ရေးရန်
ယင်ကောင်နားရာ..ပျားမပါ..၊ ပျားသကာတို့ ချိုမြိန်စေ…...